Sida loo Download CollegeHumor Videos
> Resource > Video > Sidee aad kala bixi karto Videos CollegeHumor
Waxaa laga yaabaa inaad arrin yaqaanaan CollegeHumor oo aad u badan waxaa laga yaabaa in riyaaqay. Waxaa koriyo xiiso leh dad badan oo ay ka kooban weyn, oo ay ku jiraan videos funny, sawiro, maqaallada iyo kaftanka. Mararka qaarkood marka aad soo gaarto weyn videos, iyaga oo aad u daawato laga yaabaa in marar badan. Laakiin waxa haddii ay jiraan wax xidhiidh internet lahayn? Xalka wanaagsan in tani ay tahay in ay kala soo bixi videos ka CollegeHumor u offline loo maqli karo. The Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) waa qalab sax ah si ay kuu caawiyaan. Waxaa soo bixi kartaa wax videos ka CollegeHumor iyo xitaa iyaga loogu badalo in ay qaabab loo jecel yahay oo badan si ay u geliyey qalabka la qaadi karo. Waxay u egtahay weyn, soo maaha? Bal aynu eegno sida loo isticmaalo si ay u soo bixi CollegeHumor videos hoos ku qoran.
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo iyo rakibi barnaamijkan on your computer. Waxaa jira laba nooc oo waa in aad doorato mid ka mid sax ah si aad u computer. Fur barnaamijka si aad u hesho diyaar dib markii la rakibey. Waxaan isticmaali doonaa version daaqadaha si uu idiin tuso tallaabooyinka faahfaahsan.
1 Raadi CollegeHumor videos weyn aad jeceshahay
Tag internetka ee CollegeHumor iyo riix Video tab. Markaasuu hoos si aad u hesho videos ah oo aad jeceshahay. Riix badhanka Play si ay u ciyaaro browser.
Fiiro gaar ah: Xasuuso inuu u ciyaaro videos in mid ka mid ah saddex daalacashada: IE, Firefox iyo Chrome. Tani waxay xaqiijin karaa in videos ah waxaa lagu ogaan karaa barnaamijka ka dibna la soo bixi.
2 Download CollegeHumor videos laba siyaabood
Mid ka mid ah habka ay u soo bixi videos waa in la riix Download button on xaq sare ee shaashadda video ah. Kale waa in aad nuqulka url ee video iyo riix URL paste button ku saabsan barnaamijka.
Waxaad ku dari kartaa dad badan oo videos in safka download iyada oo kor ku xusan laba siyaabood. Barnaamijkan kala soo bixi kartaa 5 videos by default waqti isku mid ah. Oo waxaa ka soo dejisan kartaa ilaa 10 videos isku mar iyada oo goobaha qaar ka mid ah in aad rabtid .
3 Beddelaan CollegeHumor videos (optional)
Tag ay ku dhameysatay kaalinta maktabadda si aad u hesho ka soo bixi videos. Hayso baaritaan deg deg ah macluumaadka aasaasiga ah ee videos iyo aad dareemi kartid videos qaar ka mid ah waa in qaabka flash taas oo aan la jaan qaada qalabka aad. Haddii ay sidaa tahay, waxaad u baahan doontaa si loogu badalo videos ah. Guji ka badalo button on xaq ah video ee maktabadda dooro qaab aad rabto. Riix OK si aad u hesho video ka badaley.
Fudud, miyaanay ahayn? Waa in aad kala soo bixi mid si uu u siiyo go a. Markaas ayaa kuu sheegi kara in uu si fiican kuu shaqeeya.
Sidee in ay tirtirto YouTube videos iyo channels
Saddex Siyaabaha la wadaagi kartaa sawiraddaada Christmas qoyska iyo saaxiibada
Talinayo Video qaabab Nexus 7
Sida loo yareeyo awoodda MKV
Hel Alternative Best Dvdfab in OS X Mavericks